Jizọs Akụzie Ihe n’Ụlọ Nzukọ Dị na Nazaret | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
JIZỌS AGỤỌ IHE DỊ N’AKWỤKWỌ MPỊAKỌTA AỊZAYA
NDỊ NAZARET ANWAA IGBU JIZỌS
Ndị Nazaret na-atụsi anya Jizọs ike. Ihe dị ka otu afọ gara aga, tupu ya agaa ka Jọn mee ya baptizim, ihe ọ bụ bụ ọkwá nkà. Mana ugbu a, ihe e jizi mara ya bụ na ọ na-arụ ọrụ ebube. Ndị bi na Nazaret na-atụsikwa anya ike ka ọ bịa n’obodo ha rụọ ụfọdụ ọrụ ebube ndị ha nụrụ na ọ na-arụ.
Ha tụsiwekwuru anya ihe a ike mgbe Jizọs gara n’ụlọ nzukọ dị na Nazaret dị ka o si eme. Ụfọdụ ihe a na-eme ebe ahụ bụ ikpe ekpere na ịgụ ihe e dere n’akwụkwọ Mozis otú ahụ e si eme “n’ụlọ nzukọ dị iche iche kwa ụbọchị izu ike.” (Ọrụ Ndịozi 15:21) A na-agụkwa amaokwu ụfọdụ n’akwụkwọ ndị amụma. Mgbe Jizọs biliri ịgụ ihe, ọ ga-abụ na ọ matara ọtụtụ ndị nọ n’ụlọ nzukọ ahụ. Ụfọdụ n’ime ha bụ ndị ọ ma mgbe mbụ ọ na-abịa n’ụlọ nzukọ a. E nyere ya akwụkwọ mpịakọta Aịzaya onye amụma. Ọ chọtara ebe e kwuru banyere onye e ji mmụọ Jehova tee mmanụ. E nwere ike ịchọta ebe ihe a dị taa n’akwụkwọ Aịzaya 61:1, 2.
Jizọs gụrụ banyere otú Onye a e buru n’amụma ga-esi kpọsaara ndị a dọọrọ n’agha na a tọhapụla ha, meghee anya ndị ìsì, kpọsaakwa banyere afọ Jehova na-egosi ụmụ mmadụ ihu ọma ya. Mgbe ọ gụchara, o nyeghachiri onye na-eje ozi akwụkwọ mpịakọta ahụ ma nọdụ ala. Mmadụ niile nọ na-ele ya shii. Ọ maliteziri ikwu okwu. Ọ ga-abụkwa na o kwutetụrụ okwu ahụ aka. Ihe sokwa n’ihe ndị o kwuru bụ okwu a dị mkpa: “Taa ka ihe a e dere n’Akwụkwọ Nsọ unu nụrụ ugbu a mezuru.”—Luk 4:21.
“Okwu ọma ndị si n’ọnụ ya na-apụta” jukwara ndị mmadụ anya. Ha jụwara ibe ha: “Onye a ọ́ bụghị nwa Josef?” Ma, mgbe Jizọs chọpụtara na ha chọrọ ka ọ rụọrọ ha ụdị ọrụ ebube ndị ahụ ha nụrụ ọ rụrụ ebe ndị ọzọ, ọ gwara ha, sị: “Obi abụọ adịghị ya na unu ga-asị na ihe atụ a metụtara m, ‘Ọgwọ ọrịa, gwọọ onwe gị; ihe ndị ahụ anyị nụrụ i mere na Kapaniọm, mee ha n’ebe a, n’obodo a mụrụ gị.’” (Luk 4:22, 23) Ọ ga-abụ na ndị obodo Jizọs chere na o kwesịrị ibido n’ụlọ mara mma pụwa ámá, ya bụ, na o kwesịrị ibu ụzọ meere ndị obodo ya tupu ndị ọzọ. N’ihi ya, ha chere na Jizọs ledara ha anya.
Jizọs ma ihe ha nọ na-eche. O chetaara ha ihe ụfọdụ mere n’Izrel n’oge gara aga. Ọ gwara ha na e nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị dị ha nwụrụ n’Izrel n’oge Ịlaịja, mana a gwaghị Ịlaịja ka ọ gakwuru nke ọ bụla n’ime ha. Kama, e zigara ya na nke otu nwaanyị di ya nwụrụ, onye na-abụghị onye Izrel. Nwaanyị ahụ bụ onye Zarefat, obodo dị nso na Saịdọn. Ọ bụ n’ebe ahụ ka Ịlaịja rụrụ ọrụ ebube zọrọ ndị mmadụ ndụ. (1 Ndị Eze 17:8-16) N’oge Ịlaịsha kwa, e nwere ọtụtụ ndị ekpenta n’Izrel, ma, ọ bụ naanị Neaman onye Siria ka onye amụma ahụ mere ka ọ dị ọcha.—2 Ndị Eze 5:1, 8-14.
Olee ihe ndị obodo Jizọs mere n’ihi otú a o si jiri ha tụnyere ndị Izrel oge ahụ, si otú ahụ gosi na ha enweghị okwukwe, nakwa na ha na-achọ ihe ga-adịrị naanị ha mma? Iwe bịara ndị nọ n’ụlọ nzukọ ahụ, ha biliri ma dọkpụrụ Jizọs pụọ n’azụ obodo. Ha kpọ ya gaa n’ọnụ ọnụ ugwu ebe e wukwasịrị obodo Nazaret ma chọọ isi ebe ahụ tụda ya. Ma, Jizọs gbụpụrụ gbalaga. Jizọs gawaziri Kapaniọm dị n’ebe ugwu Osimiri Galili.
Gịnị mere ndị nọ n’obodo Jizọs bụ́ Nazaret ji na-atụsi anya ya ike?
Olee otú ihe Jizọs kwuru dị ndị mmadụ, mana, gịnị mere iwe ji bịa ha?
Gịnị ka ndị Nazaret nwara ime Jizọs?